१२ शिजन ८ सुपर ओभर ! यस्तो छ आइपिएलमा अहिलेसम्म भएको सुपर ओभरको इतिहास |
१२ शिजन ८ सुपर ओभर ! यस्तो छ आइपिएलमा अहिलेसम्म भएको सुपर ओभरको इतिहास
२०७५, २० चैत्र बुधबार १३:४५ April 3, 2019 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौँ । आइपिएलको इतिहासमा पहिलो पटक सन् २००९ को दोस्रो आइपिएलमा राजस्थान रोयल्स र कोलकोता नाइटराइडर्सबीच सुपर ओभर भएको थियो । दक्षिण अफ्रीकाको कपटाउनमा भएको खेलमा भएको सुपर ओभरमा राजस्थानले जितेको थियो । राजस्थानले दिएको १८ रनको लक्ष्य पछाएको कोलकोताले १५ रन मात्र बनाएर खेलमा हार बेहोरेको थियो ।
आइपिएलमा दोस्रो सुपर ओभर सन् २०१० मा भएको थियो । २०१० मा चेन्नई सुपर किंग्स र किंग्स इलेभेन पंजावबीच भएको थियो, जसमा खेल पंजावले जितेको थियो । यस खेलमा पंजावले १० रन बनाउदै चेन्नईलाई ११ रनको लक्ष्य दिएको थियो तर चेन्नईले केबल ९ रन मात्र बनाएर खेल हारेको थियो ।
आइपिएलमा तेस्रो सुपर ओभर सन् २०१३ मा भएको थियो । २०१३ को आइपिएलमा दुई सुपर ओभरका खेल भएका थिए । पहिलो सुपर ओभर सनराइजर्स हैदरावाद र रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरबीच भएको थियो । सो खेल सनराइजर्सले जितेको थियो । सनराइजर्सले २० रन बनाउदै बैंगलोरलाई २१ रनको अल्क्ष्य दिएको थियो तर बैंगलोरले केबल १५ रन मात्र बनाएपछि खेल सनराइजर्सले जितेको थियो ।
त्यस्तै २०१३ मै अर्को सुपर ओभर रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र दिल्ली डेयरडेभिल्सबीच भएको थियो । बैंगलोरले १५ रन बनाउदै दिल्लीलाई १६ रनको लक्ष्य दिएकोमा दिल्लीले केवल ११ रन बनाएपछि बैंगलोरले खेल जितेको थियो ।
त्यसपछि आइपिएलको अर्को सुपर ओभर सन् २०१४ मा युएईमा भएको आइपिएलमा भएको थियो । राजस्थान रोयल्स र कोलकोता नाइटराइडर्सबीचको सो सुपर ओभर राजस्थानले जितेको थियो । राजस्थानले ११ रन बनाउदै कोलकोतालाई १२ रनको लक्ष्य दिएको भएपनि यस खेलमा कोलकोताले ११ रन बनाउदै २ विकेट गुमाएपछि खेल राजस्थानले जितेको थियो ।
त्यसपछि आइपिएलमा अर्को सुपर ओभर सन् २०१५ मा भएको थियो । २०१५ मा किंग्स इलेभेन पंजाव र राजस्थान रोयल्सबीचको सुपर ओभरमा पंजावले जितेको थियो । सो खेलमा पंजावले १५ रन बनाएकोमा राजस्थानले केबल ६ रन मात्र बनाएको थियो ।
त्यस्तै आइपिएलमा अर्को सुपर ओभर सन् २०१७ मा भएको थियो । मुम्बई इण्डियन्स र गुजरात लाइन्सबीचको सो सुपर ओभर खेलमा मुम्बई विजयी भएको थियो । मुम्बईले ११ रन बनाएको सो सुपर ओभरमा गुजरातले केवल ६ रन मात्र बनाएको थियो ।